CABDULLAAHI YUUSUF, LABO DARAN MID DOORO!.
Madaxweyne C/llaahi Yuusuf Axmed, oo dhawaan la doortay ayaa ku jira maalmihii ugu farxada badnaa noloshiisa, waayo, waxaa u rumowday riyadiisi uu mudada badan ku taamayay in uu noqdo Madaxweynaha Soomaaliya. Waxaa si weyn u dhiiragelinaysa in uu ka soo dhexbaxay shirkii socday labada sanadood ee ay u dhamaayeen dhamaan madaxdii dhaqanka, hogaamiye kooxeedyadii iyo waxgarad badan oo soomaaliyeed.
Waxaa kale oo jirta in aysan habayaraatee cidina ku doodi karin in aysan doorashadiisu si sax ah u dhicin si kastaba ha ku kasbado kalsoonida xildhibaanada baarlamaanka e. Waxaa uu booqashadiisii ugu horaysay ku tagay Adis Ababa, oo uu kala kulmay maamuuskii ugu sareeyay ee uu mudnaa hogaamiye qaran. Waxa uu soo booqday xabsigii uu shanta sano ku jiray, taasi oo soo xasuusisay booqashadii uu madaxweynihii hore ee South Africa,Nelson Mandela, ku tagay xabsigii uu 27 da sono ku xirnaa.
MADAXWEYNAHA OO LA DIRQINAYO,
C/lahi Yuusuf ma ahan nin ay ka qarsoontahay xaalada wadankiisa ka jirta wuuna ogyahay hawsha baaxada leh ee sugaysa. Kalimad kasta oo afkiisa ka soo baxda, micne weyn ayay ku fadhidaa waxaana la dhirindhirinayaa inta meelood ee ay iftiimin karto. Marka laga reebo aduunweynaha quusta ka taagan isdilka soomaalida oo sugaya bal sida uu wax u maareeyo, ayay soomaalidu waxa ay si weyn ugu kala qaybsantahay talaabada ugu haboon ee uu madaxweynuhu marka hore ku dhaqaaqi karo. Kala qaybsanaataasi oo salka ku haysa natiijadii ka soo baxday dagaaladii sokeeye ayay qolo waliba madaxweynaha ku dirqinaysaa in uu iyaga taladooda qaato oo uu ku dhaqaaqo waxa ay doonayaan. Dadka badankiisu waxa ay filayaan in uu C/llaahi laba arimood midood ku dhaqaaqi doono iyada oo mid waliba halisteeda leedahay.
1- IN UU ISKU DAYO IN UU XOOG WAX KU XALIYO;
Talaabadani waa mid ay qabaan dad badan oo ka mid ah taageerayaashiisi hore iyo kuwo ka rajo beelay in ay kooxaha iska soo horjeeda ee soomaalidu si nabadgelyo ah wax u xaliyaan. Doorashadiisa ka hor, dad badan ayaa ku celcelin jiray (waxaa loo baahanyahay nin askari ah oo waxaan cagta mariya sida C/llaahi Yuusuf). Madaxweynaha laftigiisu arintaa wuu aaminsanaa oo marar badan ayaa ka dhawaajiyay in wadanka xoog kali ah wax looga qaban karo, isaga oo muujiyay in uu yahay nin awood iyo kartiba u leh in uu shaqadaa qabto. Waa mid ka mid ah saraakiisha ugu da'da weyn ee hada nool.Waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay nin khibrad ciidan oo aad u saraysa leh. Hase yeeshee su'aasha meesha taali waxay tahay, arinta ka jirta Koofurta Soomaaliya ma u baahantahay nin sida C/llaahi oo kale ah?.
Waxaa aad u muhiim ah in aan is weydiino, ma jiray nin kale oo tilmaamahaa leh?. Haa, waa Jen.Caydiid oo waliba la kowsaday waqti ay dadka badankiisu xiise u hayeen dagaalada qabaailka.
Saldhigiisu wuxuu ahaa Muqdisho. Wuxuu haystay hubka ugu faraha badan iyo taageerayaal u daacad ah oo amarkiisa un sugaya. Jananku waxa uu ka quustay in uu xaafadaha Muqdisho wada qabsado. Siddeed sano ka bacdi way adagtahay in uu C/llaahi yuusuf xabad ka bilaabo xuduuda Itoobiya, Xamar galo, xaafadah dariiq dariiq ugu dagaalamo, hubka aruuriyo oo halkaa ka dhiso dowlad lagu naaloodo. Adeegsiga ciidamo shisheeye ayaan iyaduna haba yaraatee wax ku soo siyaadinayn hub ka dhigista malayshiyooyinka iyadoo ay tusaale inoogu filanyihiin 36,000 ee uu Maraykanku hogaaminayay sanadkii 1993 dii guul daradii ay la kulmeen, inkasta oo la oran karo dad badan ayay badbaadiyeen in ay gaajo u la'daan, halka ay in badana ku xasuuqeen.
Waxaa kale oo iyaduna intaa sii dheer in ku jiritaanka C/llaahi Yuusuf uu mudo dheer ku soo jiray dagaalada sokeeye, in aanay micneheedu ahayn in uu yahay in guul u nasiib badan. Laba dagaal oo uu la galay taageerayaashii ururkii Al-Itixaad iyo kuwii Jaamac Cali Jaamac oo uu labadaba Boosaaso ku qabsaday ayaa ka dhigtay xidig dagaal oo Bari ka soo baxay. Meelo ka mid ah koofurta oo ay Muqdisho ka mid tahay iyo Somaliland ayaa dadkii uu C/llaahi dagaaladaa ku jabiyay looga arkaa rayid aan waxba sidaa u hubaysnayn, sidaa darteed, wuxuu ula muuqdaa nin aan wali ka qayb qaadan wax dagaal weyn lagu tilmaami karo.
2- IN UU NABAD WAX KU XALIYO;
Runtii waa mida ay u riyaaqayaan dadka badankiisu,hase yeeshee, hoggaamiye kooxeedyada koofurta Soomaaliya oo aan lahayn siyaasad leh meel loogu soo hagaago iyo balan ka xirma toona, ayaa caqabad weyn ku ah maamul dawladeed oo la hirgeliyo. Dhamaantood waxay doonayaan jagooyinka dowlada ugu sareeya lagamana yaabo in ay isku tanasulaan. Dowlad in la dhiso waxaa ka fudud in la carqaladeeyo. C/llaahi qudhiisa ayaa ah nin ay ku taal sumad la yiraahdo dawlad diid. Laga soo bilaabo dawladii Maxamed Siyaad Bare, C/llaahi Yuusuf shaqada ugu weyn ee uu qabtay waxay ahayd fashilin dawladeed. Hogaamiye kooxeedyada koofurta badan koodu waa raggii ay wax isla majaxaabin jireen, sidaa darteed ayaanay jirin awood weyn oo shacab oo taageero u haysa dawlada uu C/llaahi Yuusuf madaxweynaha ka yahay, taasi oo hadii uu haysan lahaa noqon lahayd unuggii ugu horeeyay ee aqoonsigiisa.
Ugu danbeyntii, dadka badankiisa oo aad ugu haraadan dowlad soo celisa sharaftii Soomaaliya, ayaa ku talinaya in duud duub loo qaato dowlada ay madaxda ka yihiin C/llaahi iyo hogaamiye kooxeed yada kale, waa labo daran mid dooro e, iyadoo aanay jirin hadii la mucaarado rajo laga qabo dowlad soomaaliyeed sanado badan oo soo socda.